Mmetụta Greenhouse: Gịnị bụ ihe ọhụụ a na otu esi arụ ọrụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Ciencia, Nkewa
Nke griin haus utịp Obu ihe obu ihe mmadu nile n’ututu ta. Ọtụtụ na-ekwu na griin haus na-amụba okpomoku zuru ụwa ọnụ ma na-abawanye nsonaazụ nke mgbanwe ihu igwe. O metụtakwara okpomoku zuru ụwa ọnụ. Ma ị maara n'ezie ọrụ nke griin haus mmetụta, otu esi eme na mmetụta ọ nwere na mbara ala?
Tupu ịkọwa ihe griin haus mmetụta bụ, m ga-eme a na nkwupụta nke mere na ị na-agụ nke a na mkpa ọ ga-enwe: "Ewezuga mmetụta griin ha, ndụ agaghị adị taa dịka anyị siri mara ya ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume". Nke ahụ kwuru, enwere m olileanya na ọ ga - enweta mkpa ọ dị.
1 Nkọwa nke Greenhouse Mmetụta
2 Gini bu griin haus?
2.1 Alụlụụ mmiri
2.6 Ndị CFC
3 Ihe si na ya pụta nke griin haus mmetụta
4 Mmetụta ọjọọ nke ikuku gas na-emetụta ụmụ mmadụ
4.1 Mmiri Acid
4.2 Igwe anwụrụ ọkụ
5 Gịnị ka anyị nwere ike ime iji belata griin haus mmetụta?
Nkọwa nke Greenhouse Mmetụta
Ihe akpọrọ "griin haus mmetụta" nwere ịrị elu nke okpomọkụ nke ụwa kpatara omume nke otu gas, ụfọdụ n'ime ha mepụtara n'ụzọ dị ukwuu nke mmadụ, nke na-amịkọrọ ụzarị ọkụ infrared, na-eme ka elu ụwa na akụkụ ala nke oyi akwa ikuku dị ọkụ. Ọ bụ ekele maka mmetụta griinụ a na ndụ dị n'ụwa nwere ike, ebe ọ bụrụ na ọ bụghị maka nke a, nkezi okpomọkụ ga-adị -88 degrees.
Gini bu griin haus?
Ihe a na-akpọ griin haus ma ọ bụ ikuku griinụ, nke kpatara mmetụta a kọwara n'elu, bụ:
Alụlụụ Mmiri (H2O)
Agbanyeghi na ha niile (ma ewezuga ndi CFC) bu eke, ebe obu na Ngbanwe nke ulo oru na karia iji mmanu mmanu eme ihe n 'ulo oru ndi ozo na njem, enweela mmụba di elu na ego ikuku. Ihe e ji mara ikuku gas a bụ nke ahụ jigide okpomọkụYabụ, ka elu ikuku ikuku ndị a na ikuku, ikuku ọkụ nwere ike ịgbapụ.
Ihe ọ bụla mebiri site na ịdị adị nke ọrụ ndị ọzọ mmadụ, dị ka igbukpọsị osisi, nke na-eme ka ikike ikuku nke ikuku kwụsị iji kpochapụ carbon dioxide, bụ isi ihe na-akpata mmetụta griin haus ebe ọ bụ nke a kacha ewepụ taa.
Alụlụụ mmiri (H2O) bụ nke kachanụ onye nyere aka na mmetụta nke griinụ na ọ bụ nke kachasị emetụta ihu igwe na, ya mere, ọ bụ nke mmadụ na-achịkwa. Nke a bụ n'ihi na evaporation siri ike na-adabere na okpomọkụ dị n'elu (nke ọrụ mmadụ anaghị agbanwe agbanwe, ọ bụrụ na anyị atụle nnukwu mpaghara), yana n'ihi na alụlụ mmiri na-agafe ikuku na usoro ọsọ ọsọ, na-adịgide adịgide kwa oge. Ọkara nke otu ọ bụla asatọ ruo iteghete ụbọchị.
Carbon dioxide (CO2) na-enye aka na ọnọdụ okpomọkụ nke ụwa, ọ bụrụhaala na njupụta ya dị n'ime oke. Na-enweghị carbon dioxide, wouldwa ga-abụ ngọngọ nke ice, mana n'aka nke ọzọ, ngafe na-egbochi ọpụpụ nke okpomọkụ n'ime oghere na ihe kpatara oke okpomoku nke uwa. O sitere na ihe ndi sitere n'okike (iku ume, ire ere nke ihe ndi ozo, oke ohia) na anthropogenic (oku nke oku ndi ozo, mgbanwe nke eji ala (tumadi igbukpo osisi), oku nke ihe ndi ozo, ihe ndi ulo oru, wdg.
NASA mepụtara vidiyo na-egosi ikuku carbon dioxide nke ụwa
Ọ bụ ihe na-eme n'ụdị gas na okpomọkụ na nrụgide nkịtị. Ọ bụ ihe na-enweghị ụcha na o siri ike soluble na mmiri na mmiri ya mmiri. 60% nke umu anwuru N’uwa nile o sitere na anthropogenic sitere na oru ugbo na oru ndi ozo. Ọ bụ ezie na ọ sitere na mbibi nke ihe mkpofu ahịhịa, ihe ndị sitere n'okike, mmịpụta nke mmanụ ọkụ, wdg. Na ọnọdụ ebe ikuku oxygen adịghị.
Nitrogen oxides (NOX) bụ gas nitrogen na ikuku oxygen na-etolite na combustion na oke oxygen na elu okpomọkụ. A na-ahapụ ha n'ime ikuku site na ikpochapu ụgbọ ala (ọkachasị mmanụ dizel na ịmị ọkụ), site na combustion nke coal, mmanụ, ma ọ bụ gas nkịtị, na n'oge usoro dị ka ịgbado ọkụ arc, electroplating, etching metal, and dynamite detonation.
Ozone (O3), na ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide, bụ gas na-enweghị ụcha nwere isi na-agba agba, nke n'ọtụtụ nnukwu nwere ike gbanwee. Ihe onwunwe ya bụ na ọ bụ ezigbo oxidant, ebe a maara ya maka ọrụ dị mkpa ọ na-arụ na mbara igwe. Osimiri Stratospheric na-arụ ọrụ dị ka nzacha na anaghị ekwe ka ọ gafee Ihe na-emerụ emerụ UV n’elu ụwa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ozone dị na mpaghara dịkarịsịrị elu nke ikuku (troposphere), ọ nwere ike ibute ahịhịa na mkpokọta zuru oke.
Chlorofluorocarbons, nke a na-akpọ CFCs, sitere na hydrocarbons na, n'ihi oke nkwụsi ike nke anụ ahụ ha, ejirila ọtụtụ mee ihe dị ka ndị na-eme ka ndị mmadụ, ndị na-emenyụ ọkụ na ndị na-eme ka aerosol. Amachibido imepụta na iji chlorofluorocarbons eme ihe Usoro Montreal, n'ihi na ha na-awakpo oyi akwa ozone site na mmeghachi omume fotochemical. Otu tọn CFC ga-emepụta mmetụta okpomoku zuru ụwa ọnụ n'ime afọ 100 na-esote nsị ya n'ime ikuku nhata ugboro 4000 otu ogugu nke carbon dioxide (CO2).
Ihe si na ya pụta nke griin haus mmetụta
Dika anyi huworo, ihe griin haus abughi “ihe ojoo” na ihe nkiri a, kama o n’aga n’ihu. Ka ọrụ mmadụ na-abawanye, anyị na-ahụ etu ikuku anwuru nke gas na-abawanye na otu oge ọ bụla bawanye nkezi okpomọkụ nke ụwa. Nke a nwere ike ibute nsonaazụ na-adịghị mma maka gburugburu ebe obibi yana ụmụ mmadụ na ụzọ ndụ ha
Nsonaazụ nke griin haus nwere ike ibute bụ:
Mmụba nke nkezi okpomọkụ nke ụwa.
Oké ọkọchị na mpaghara ụfọdụ na idei mmiri na ndị ọzọ.
Oke ikuku hurricane guzobere.
Na-agbaze agbaze agbaji polar na-aga n'ihu, na-ebute mbili elu nke oke osimiri.
Mmụba nke mmiri ozuzo na ọkwa mbara ala (ọ ga -epe mmiri ụbọchị ole ma ole karịa mmiri ozuzo).
Mee ka ọnụọgụ nke ụbọchị na-ekpo ọkụ, sụgharịrị na ebili mmiri.
Mbibi nke gburugburu ebe obibi.
Na aka na nso nso Nkwekọrịta Paris Mba ndị kwadoro ya ezubela iwelata anwuru ikuku gas na ikuku, si otú a na-enyere aka belata mbibi nke mgbanwe ihu igwe. Ndị ọkà mmụta sayensị emeela ọtụtụ ọmụmụ nke ejiri kwubie na ọ bụrụ na ogo okpomọkụ nke ụwa na-abawanye karịa Celsius abụọ, mmetụta ya agaghị abụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Ọ bụ ya mere ha ji tinye ọnụ ọgụgụ kachasị elu CO2 na mbara ala na 400 ppm. Ruo ugbu a, nchikọta a agafewo afọ abụọ.
Mmetụta ọjọọ nke ikuku gas na-emetụta ụmụ mmadụ
NO2 nwere ike ibute mmetụta na ahụike na ahụike nke ndị mmadụ, na-eme ka iwe na mucosa imi na-emebi usoro iku ume site na ịbanye n'ime ime akụkụ nke ngụgụ, yana site na itinye aka na nhazi mmiri ozuzo acid.
N'akụkụ ya, SO2 na-emetụta mmiri ikuku iji mepụta mmiri ozuzo acid, na-akpasu imi na anya ma na-akpata ụkwara mgbe a na-ekuru ya. Mmiri mmiri Acid nwekwara ike inwe mmetụta na-apụtachaghị ìhè na ahụ ike, ebe ọ bụ na mmiri acidified nwere ike igbari ọla na ihe ndị na-egbu egbu site na ala, nkume, mmiri na ọkpọkọ wee buru ha gaa na mmiri mmiri ọ waterụ forụ maka oriri mmadụ, na-emepụta nsị.
Isi mmetụta gas ndị a na gburugburu ebe obibi bụ mmiri ozuzo acid. Ihe omume nke mmiri ozuzo acid (tinyere snow, foogu na igirigi acid) nwere ihe ojoo na gburugburu ebe obibi, n'ihi na obughi nani na o na emetuta ogo mmiri, kamakwa ala, ihe ndi ozo na, n'ihi nke a, kariri ahihia. Mmetụta ọzọ nke mmiri ozuzo acid bụ mmụba na mmiri acid nke mmiri ohuru na n'ihi nsonaazụ nke ọla dị arọ nke na-egbu egbu nke na-ebute mmebi nke agbụ trophic yana usoro ọmụmụ nke azụ, na-akatọ osimiri na ọdọ mmiri na nwayọ nwayọ ma na-adịghị mma na anụmanụ ha.
Mmiri mmiri Acid nwekwara mmetụta na-adịghị mma n'ime gburugburu obodo mepere emepe, n'otu aka, mbibi nke ụlọ, mbibi nke nkume nke katidral na ihe ncheta ndị ọzọ akụkọ ihe mere eme na, na nke ọzọ, mmetụta nke usoro iku ume na mmadụ, ekwuruworị .
Gịnị bụ mmiri ozuzo acid?
Igwe anwụrụ ọkụ
Mmetụta ọzọ nke gas gas bụ ihe a maara dị ka smog; nke bụ anglicism guzobere njikọ nke okwu anwụrụ ọkụ (anwụrụ ọkụ) na foogu (foogu) bụ ụdị ikuku mmetọ sitere na incorporation nke anwụrụ ọkụ n'ime foogu (site n'otu aerosol ọzọ aerosol). Grey smog ma ọ bụ ụlọ ọrụ smog ụlọ ọrụ bụ ikuku ikuku na-emepụta soot na sọlfọ. Isi iyi nke ihe na-emetọ anwụrụ na-eme ka anwụrụ na-acha ntụ na-acha anwụrụ ọkụ bụ combus nke kol, nke nwere ike ịbụ sọlfọ na-adị elu. E nwere foto anwụrụ ọkụ sitere na ihe ndị nwere nitrogen na anwụrụ ọkụ ụgbọala, agwakọtara n'okpuru mmetụta nke radieshon nke anyanwụ na-emepụta ozone gas, nke na-egbu egbu nke ukwuu.
Gịnị ka anyị nwere ike ime iji belata griin haus mmetụta?
A ghaghị ịchịkwa ikuku nke gas na nha abụọ dị iche iche, dabere na ha na-ezo aka na nsị site na ụgbọ ala ma ọ bụ na ụlọ ọrụ n'ozuzu.
Enginesgbọala na injin ụgbọ ala bụ ebe dị mkpa imetọ ihe ndị a. Iji belata anwuru, ọ ga-adị mma iji ma mgbochi na nhicha maka gas ndị injin na-ewepụta tupu ewepụta ha na ikuku. Nwere ike inye aka n'ibelata mmetụta griinụ na usoro ndị a:
Jiri ụgbọ njem ndị ọzọ, ịnya igwe ma ọ bụ ịgagharị.
Jiri injinị na teknụzụ dị ala na-emetọ ala, dịka ọmụmaatụ igwe nke na-eji dochie mmanụ ndị dị ugbu a na obere mmanụ na-emetọ, dịka gas, mmanya, hydrogen ma ọ bụ eletriki.
Meziwanye arụmọrụ nke igwe ahụ ka enwere ike iji kilomita ole na ole jiri mmanụ mee ọtụtụ kilomita.
Gbanwee njin ahụ ka ọ belata.
Mee ka ọnụego na ụtụ isi nke ụgbọ ala ndị na-emetọ emetọ ga-akwụ ma kwalite mgbanwe ha maka ndị ọhụrụ. Nke a ga - agba ndị na - emepụta ụgbọala ume iji belata anwụrụ ọkụ ma gbaa ndị na - azụ ahịa ume ka ha zụta ugboala dị ọcha.
Mepụta mpaghara na-agafe agafe na etiti obodo yana, n'ozuzu, gbochie mgbasa nke ụgbọ ala ndị ọzọ na mpaghara ụfọdụ nke obodo.
Jiri ụgbọ njem ndị ọzọ mee ihe
Site na nke a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mmetụta a nke na-eme ka anyị dịrị ndụ mana na ọ dịkwa mkpa idobe ya na nguzosi ike zuru oke ka mmụba ya ghara ịkpata ọdachi ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Greenhouse mmetụta
Edemede ahụ na-atọ ụtọ nke ukwuu, ana m ekele gị
Foto na vidiyo: Oké ifufe Ugwu '' oké ifufe '' na Canada
Gịnị bụ osimiri nke ikuku?